COTONEASTER HORIZONTAL: XEERARKA AASAASIGA AH EE BEERTO IYO DARYEELKA - SOOSAARKA DALAGGA
Waxaan koraan cotoneaster cagaaran ee beerta
Si loo abuuro naqshad dhamaystiran ee beerta ama degaanka, mulkiilayaasha dhulalka badani waxay ku fekeraan noocyada ay ugu fiican tahay in ay qalabeeyso gurigaaga xagaaga. Ka mid ahaanshaha kala duwan ee noocyada soo bandhigay dhirta park, waxaad si fudud u heli kartaa wakiilka flora ka aagga juqraafi kasta. Si kastaba ha noqotee, badankoodu waligood marnaba waxay leeyihiin caanno badan, laakiin qaar ka mid ah waxay abuuraan farxad dhab ah oo iyaga ku saabsan.
Noocyada aadka loo jecel yahay ee gudaha guryaha ayaa ah cotoneaster. Geedka laguma kala soocayo iftiin gaar ah ee midabada iyo shakhsiga. Sidoo kale, looma yeeri karo la aqoonsan karo marka hore. Si kastaba ha ahaatee, tani ma bixinayso dhibaatooyinka baadiyaha xagga wadada horumarinta degaannada cusub. Sidaas darteed Miyuu cidhiidhi yahay cotoneaster caan ku yahay qaabka muuqaalka? Iyadoo kuwaasi waa inaanu ogaanno, iyo sidoo kale in aan ogaano shuruudaha lagama maarmaanka u ah si loo beero warshadan beerta.
Cotoneaster tiirsan waxaa loola jeedaa noocyada qurxinta taas oo matala Pink Family. Deegaanka dabiiciga ah, waxaa badanaa loo qaybiyaa Shiinaha. Geedkan jilicsan ee duurjoogta ah waa quruxda ugu fiican ee dabacsanaan la'aanta cidhbaha. Muuqaalka ugu muhiimsan ee geedkan waxaa la dhigay magaciisa. Tani waxay ugu horreyn ku tahay curyaan xajmi ah, taas oo lagu gartaa caleenta cadceedda.
Cagaarshow, dhoobada, khudaarta cagaaran, tufaaxa, khudradda, cawska, cawska, badmaalka, jiirka, xayawaanka, khudradda, fawaakihda, shadberries, geedka duurjoogta ah, geedka, roogga, roogga, roogga iyo cagaarka, waxayna ku badan yihiin dhammaan meelaha adduunka.
Ma taqaanaa? Meelahan xayawaanku waxay ku heleen magaca guriga iyagoo u sabab ah isku midka ah miro la noocyada la yiraahdo "dogwood" oo loo adeegsaday cuntada tan iyo wakhtiyadii hore.
Cabbirka dhirta waa mid aad u yar, oo dhererkeedu aanu ka badneyn 70 cm, ballaadhkeedana waa in ka badan 1.5 mitir. Caleemaha xayawaanku waa kuwo jajaban waxayna abuuraan taaj culus. Bannaan kasta wuxuu ku daboolan yahay caleemo yaryar oo wareegsan oo ah midabka cagaaran ee madow, taas oo u dhaw in dayrta isbeddel ku ah dabeecad casri ah. Muddada ubax ee noocaani waxay bilaabmaysaa dhamaadka bisha May waxayna socotaa 3 asbuuc, halka caleemaha la daboolay yar yar, oo ku dhowaad aan la isku halleyn karin ama ubaxyo midab ah oo ah casaan-casaan cad. Ka dib markii ubax on miraha dhalaalaya casaan yar yar u muuqdaan, taas oo kiisaska intooda badan ku sii jiri kartaa warshadda ilaa guga soo socda.
Ma taqaanaa? Magaca Laatiinka ah ee loo yaqaan 'sotoneaster', oo ka tarjumay Giriiggii hore ee macnihiisu waxa weeye "sida quince." Magacani wuxuu kacay sababo la xiriira xaqiiqda ah in caleemaha mid ka mid ah noocyada dhirta ay u egtahay caleenta quince.
Ka mid ah wakiillo badan oo ka mid ah kuwa ugu caan ah ee bannaanka u jecel yahay cotoneaster variegatus (Variegatus). Warshad qaangaar ah waa yar tahay, dhererkeeduna kama badna 30 cm dhererka iyo 1.5 m width. Kala duwanaanta geedkan ayaa waxay heshay caan ka mid ah calaamadaha la yaabka leh ee xilliga dayrta. Iyadoo bilawga ah cimilada qaboobaha, caleenta cagaaran waxay badaleysaa midabkeeda burgundy oo leh jajab jilicsan oo jilicsan. Tani waxay ka mid tahay baadiyaha siinayaa beerta jawi kulul iyo cimilo caan ah xilliga qaboobaha.
Faa'iidooyinka iyo codsiga
Cotoneaster yare ee beerta ayaa leh codad badan oo kala duwan. Warshadda waxaa lagula talinayaa in lagu beero dhagaxyo, meel u dhow derbiyada xajinta. Sidoo kale, geedkan waxaa loo isticmaali karaa noocyada cawska. Qaabka dhismaha ee caleemaha wuxuu u oggolaanayaa inuu si buuxda u daboolo degaannada deegaanka oo uu noqdo noocyada ugu weyn ee ku yaala.
Hawsha ugu weyn ee geedka - Tani waa buuxinta buuxda ee booska qaybta hoose ama dhexe. Dalagyada beeray si ballaaran ama dhirta qudh ah. Caadi ahaan caan ah waa ciriiri ama jeexan derbi ah. Si arrintan loo sameeyo, dhirta yaryar waxaa lagu beeray qiiqa xayndaabka qiyaas ahaan 30 cm midba midka kale. Ka dib 2 sano oo kobcin bilaash ah, waxaad si ammaan ah u bilaabi kartaa geeddi-socodka sameynta xayndaab iyadoo la adeegsanayo xiiritaanka beerta. Si tartiib ah, geedku wuu koraa, ka dibna dhowr sano ka dib xayndaab ku nool xayawaanka oo dhan.
Ma taqaanaa? Cotoneaster waxaa markii hore loo isticmaalay warshad qurxin ah oo ku taal beerta beerta ee 1864.
Marka sii kordhaya warshad ka soo caleemaha of baadiyaha foomka adag oo taajka ah, taas oo muuqaalka ayaa qaadan kartaa on fiirin ka duwan. Waxyaabaha noocan oo kale ah ee qaabeynta muuqaalka ayaa lagu dari karaa nooc kasta oo dhir ah, taas oo suurtogal ka dhigaysa in la abuuro aagag muuqaal ah. Sidoo kale, noocyada noocan ahi waa qayb ka mid ah "Beerta Jabbaan"; iyadoo la adeegsanayo baadiyaha, qaababka dabiiciga ah ee leh qoryaha laalaabka ah ayaa la sameeyaa.
Hubi noocyada ugu caansan ee cotoneaster.
Si aad u qalabayso geed cotoneaster beertaada, waa inaad u dulqaadataa oo aad u dadaaleysaa. Inkastoo xaqiiqda ah in warshadani aan qabyo ahayn, beerashada ciidda furan waxay u baahan tahay dadaal badan. Muddadii ugu fiicnayd ee geeddi-socodkani wuxuu noqonayaa guga hore.
Waa muhiim! Cotoneaster waa in la beeraa ilaa burooyinkeeda ay ku dul qoran tahay, haddii kale dhirta ma degi karto meel cusub.
Geedku wuxuu jecel yahay goobo leh iftiin kala firdhisan ama hooskii qayb ahaan, iftiin la'aanta ma saameynayso qurxinta duurka, sidaas awgeed si ammaan ah ayey u kobcinaysaa shucaaca iftiinka qoraxda. Si kastaba ha ahaatee, shaybaarka ugu fiicani wuxuu horumarin karaa shuruudaha iftiinka wanaagsan iyo isku dhafka saxda ah ee dhererka dheer ee beerta.
Caanaha loogu talagalay cotoneaster
Carrabku waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu horreeya ee la wajihi karo marka la beero cotoneaster. Xaaladaha oo dhan maahan baadiyaha si fiican ayaa loo qaadayaa. Xalka ugu fiican wuxuu noqon karaa in lagu daro dusha sare ee qoryaha loo yaqaan "sand, peat peat" iyo "cows", kaas oo loo diyaariyey in la barbardhigo 2: 1: 2 oo dhan ka hor beerashada, waxaa kale oo muhiim ah in lime lagu daro ciidda 300 grams halkii mitir labajibbaaran. Ku darida dusha sare ee noocan oo kale ah waxay ku kordhineysaa ku dhawaad ​​100% badbaadinta dhalidda. Waa hagaag, carrada ugu muhiimsan waa in uu leeyahay awood wanaagsan, sida xaaladaha qoyaan dabacsan, geedku wuxuu si tartiib tartiib ah u kobciyaa ugana dhicikaraa xataa ugu dhakhsaha badan.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo horumariyo cotoneaster ee dacha: abuurka, xoqitaanka, gooynta ama dhejinta. Dhammaantood waxay bixiyaan fursad ballaadhan oo ay ku beeri karaan goobtan, laakiin mid kasta oo ka mid ah ayaa lagu kala duwan yahay waxtarka sare.
Beeridda abuurka waa habka ugu wax ku oolka badan ee loo helo cotoneaster, maadaama aysan haysan heer sare oo biqilka ah. Iyada oo qiyaastii ugu ballanqaaday, 60 boqolkiiba oo keliya miraha la soo saaray ayaa soo saari doona tamar baaxad leh oo buuxa. Horraantii Bishii Oktoobar, ka dib markii miraha si buuxda u bislaadaan, waxay si taxadar leh u jeexjeexaan oo hilibka ayaa laga saaraa diirka.
Saamaxda soo dhalatay waxay ku shubeen weel biyo ah. Kuwa ku dhajiya xagga hoose waxay ku habboon yihiin beeridda, inta kale waa in la diido. Next, abuur ah lagu beeray ciidda. Muddadii laga soo bilaabo dhammaadkii bishii May ilaa bilowgii caleemaha Juun, waxay u muuqdaan kuwa, kuwaas oo la yareeyey baahi. Kaliya 2-3 sano ka dib, marka geedo yihiin xoog, waxaa lagu beddeli karaa meel joogto ah. Waa muhiim inaadan iloobin inaad sare u qaaddo.
Waa muhiim! Abuurka Cotoneaster waxay u baahan yihiin in lagu beeray xilliga dayrta, sida caleemaha caqli leh waa inay ku qaataan jiilaalka carrada. Taas la'aanteed, waxay isku mid yihiin hoos u dhaca dhowr jeer.
Ku dhalmo by gooyn dhalinyarada waa Habka ugu waxtarka leh ee lagu kori karo baadiyaha cotoneaster ee bannaanka u furan. Si loo dhammeeyo, horraantii Juun, wax soo saarka ayaa la diyaarinayaa. Laga soo bilaabo caleemaha yar yar, gooyn waa la gooyaa, ka dib markii taas oo lagu qooyay maalin biyo ah ama xal gaar ah ee xididka. Ka dib markii in, gooyn ayaa lagu beeray ciidda furan ee furan ee xagal ah 45 °. Wixii rooting ah waxaa ugu fiican in la isticmaalo substrate gaar ah, kaas oo la diyaariyo ka qaybo siman ee ciid iyo peat. Qalabka lagu beeray dhulka waxaa lagu daboolayaa qaybta la gooyey ee dhalada oo leh qoorta furan. On gooyn joogta ah oo joogta ah transplanted guga soo socda.
Si aad u hesho warshad cusub sababtoo ah dhajinta, guga hore ee geesaha sare ee caleemaha dhalinyarada ah ayaa lagu dhuftay qoto dheer oo ku saabsan 10-15 cm Si tan loo sameeyo, godadka yaryar waxaa la abuuray ciidda agagaarka geedka, hoose ee waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo substrate gaar ah loo diyaariyey qaybo siman oo peat iyo ciid. Ka dib markii in, layers waxaa la iloobaa sanad, iyo kaliya guga soo socda, caleemaha xidid waa la googooyaa iyo transplanted si joogto ah.
La qaboojinta cotoneaster - Tani waa habka ugu wanaagsan ee lagu abuurayo geedkan. Si arrintan loo sameeyo, dhirta waxaa lagu koray ulo gaar ah, oo laga diyaariyey asliga ah ee geed kasta oo ka mid ah Pink. Nidaamka wuxuu bilaabmaa horraanta gu'ga. Buufiska cotoneaster waxaa lagu duuduubay dusha sare ee geed, ka dib markii dhammaan laamoodyada laga saaro. Ka hor intaan la raacin, biyahu wuxuu ku jiraa tababarka gaarka ah: goynta caleemaha ayaa la jarayaa qaybta sare, iyo garabka qaybta hoose.
Waa muhiim! Si looga fogaado lakabyada dusha sare ee gooyaha go'ay, waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo gooya sida diyaarka beerta.
Muddo bil gudaheed, qaybta tallaalka waxay qaadataa xidid waxayna bilowdaa inay si firfircoon u koraan. Laga soo bilaabo barta this, waxaa lagama maarmaan ah in si dhow ula socdaan geedi socodka kobcinta, xoqin warshadda si loo sameeyo furka xajka ah. Ka dib 2 sano, taajka buuxa ee shtambur waxaa la sameeyaa dabeecad koofiyado ah, kaas oo beertii kasta uu ku faani karo.
Sida loo daryeelo warshad
Qeybta ugu badan, ma aha wax adag in lagu daryeelo nooca noocaan ah, sida maaha mid aan dabiici ahayn oo uma baahna aqoon gaar ah tan.
Cotoneaster wuxuu loola jeedaa noocyo aan u dulqaadanayn qoyaan xad dhaaf ah, sidaa daraadeed dhirtaas uma baahna waraabin joogta ah, xitaa haddii ay dhacdo abaarta. Nidaamka waxaa la samayn karaa ugu badnaan 1 jeer bishiiba. Si kastaba ha noqotee, xagaaga qallalan iyo kuleylka ah, geedku weli waa lagu talinayaa inuu marar badan la waraabiyo, tanina waa qadarka biyaha ee waraabinta waa inaanay ka badnaan 8 baaldiyood (oo ah warshad qaangaar ah). Xaaladdan, xaddiga waa inuu ahaado 1 mar 2 asbuuc. Ka dib markii la waraabiyo, waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda si qoto dheer ah oo ku saabsan 15 cm saldhigga iyo, haddii ay suurtagal tahay, baabi'iso haramaha.
Warshadu uma baahna nafaqo dheeraad ah, si kastaba ha ahaatee Guga, quudinta bacrimin waa lagama maarmaan. Marka ugu horeysa ee nidaamka waxaa la sameeyaa horraanta gu'ga, iyada oo bilawga maalmood ee ugu horreeya qoraxda. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal xal gaar ah. Si aad ugu diyaargareyso 10 litir oo biyo ah kala-gooyaa 25 g oo ah HOL, ka dib marka walaxda soo baxda ay ku shubanto saldhigga geedkan. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa bacriminta guud ee Kemira iyada oo xisaabinta 100 g halkii mitir labajibbaaran. ciid. Waqtiga xiga ayaa geedkan waxaa la bacrimiyey ka hor ubax (dhammaadka May). Si taas loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa 15 g halkii mitir labajibbaaran. sulfuric potassium ama 60 g halkii 1 sq m. granules superphosphate.
Dalaggu wuxuu loola jeedaa nooc noocan oo kale ah, taas oo si ammaan ah u wareejinaysa manjooyin. Bannaanka xilliga xiga waa in lagu daboolaa nadaafadda, dib u habeynta iyo qaabaynta (timerka) timo. Ujeedooyinka sharraxaadda, manjooyin caalami ah ee warshadda waxaa lagu fuliyaa guga, ilaa ay burooyinkeeda u muuqdaan. Xaaladdan oo kale, caleemaha sannadlaha ah waa in la gooyaa iyadoo aan ka badneyn saddex meelood meel koritaankooda. Ka dib markii manjooyin, dhirta si dhakhso ah u koraa, laakiin qaabka taajka ah waa mid cakiran.
Waxay u baahan tahay marmarka qaarkood si ay u ilaaliso muuqaalka. Rejuvenating haircut sidoo kale waxaa la fuliyaa ilaa muuqaalka kelyaha. Waqtigaan, waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo aqoonsado caleemaha aan loo baahnayn iyo iyaga jaray iyaga oo aan lumin muuqaalka guud ee tayada leh ee duurka. Manjooyin nadiif ah ayaa la samayn karaa wakhti kasta oo sanadka ah, maaddaama ka saarista qaybaha dhirta dhintay aysan kicin koboca geedaha.
Daboolka cotoneaster ee jiilaalka?
Inkasta oo xaqiiqda ah in cotoneaster uu yahay mid hooseeya, hadana waxaa iska leh noocyada dhaxanta u adkaysta, weli wali waa waxay u baahan tahay diyaarin taxadar leh jiilaalka, gaar ahaan gobollada kuxirta waqooyiga qabow daran. Tani, ciidda agagaarka saldhiga waa mulched, ka dib markii taas oo caleemaha waxaa loo dhigaa sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee dhulka iyo badbaadsan ee booskan. Marka xigta, dhirta waa la xiiray. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa waxyaabo dabiici ah oo daboolan, oo laga iibsan karo dukaanka dhirta, caleemo dhaca ama laamihii geedaha qallalan. Foomkaan la isku daray, cotoneaster wuxuu ku noolaan karaa xitaa dhaxan ugu daran.
Beerta ornamental ee ku xoortay geedaha waa hab fudud oo fudud oo loo qurxiyo geedaha iyo geedaha. Waxay had iyo jeer ka caawiyaan inay abuuraan jawi xafladeed ee dalka ama degaanka. Cotoneaster yare ee dareenkan waa doorashada ugu fiican, taniyo beerashada iyo daryeellaha waa mid sahlan, waxaad u baahan tahay kaliya inaad fiiro gaar ah u yeelato oo kaliya 2 jeer sanadkii iyo warshadu waxay ka farxin doontaa milkiilaha quruxda leh.